Tag - အရောင်းအဝယ်-ဗျူဟာ
Tag - အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ
12.07.2017 15:50 ELLIOTT WAVESနည်းစနစ်ဖြင့် ထရိတ်ဒင်းလုပ်ရန်နည်းလမ်းများ
အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက်
19.05.2017 17:03 ချယ်ရီပန်း ထရိတ်ဒင်းနည်းပညာ
မသောက်ဘဲမနေနိုင်တဲ့သူတွေ၊ ဂျပန်အစားသောက်တွေနဲ့ အာရှအပိုင်းမှာ ထရိတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူများအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများက
19.05.2017 17:29 TURTLE SOUP (လိပ် စွပ်ပြုပ်) ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာ - L. RASCHKE မှ ချက်ပြုပ်ပါတယ်
ယနေ့ Turtle Soup (လိပ် စွပ်ပြုပ်) လို့ခေါ်တဲ့ ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာကို ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပါ.
19.05.2017 17:26 ၅ ခုမြောက် အစိတ်အပိုင်း နှင့် ပါဝါရိမ်းဂျား swing ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာများ
Fifth element နည်းဗျူဟာရဲ့ အဓိက အားသာချက်က အ၀င်ဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင့်ကိုစောစောပြောပြပါတယ်.
19.05.2017 17:18 OZ forex စနစ်: ထရိတ်တစ်ခုတွင် 100-800 Pip
အာဂမိဘမဲ့ကလေးလေး Dorothy Gale၊ သူမရဲ့ ခွေးလေး Toto တို့နဲ့
19.05.2017 17:12 သံချပ်ကာ ၁၅၀နည်းစနစ်အခြေခံ ထရိတ်ဒင်း နည်းစနစ်
သံချပ်ကာ ၁၅၀နည်းစနစ်အခြေခံ ထရိတ်ဒင်း နည်းစနစ်က ထရိတ်ဒါတွေ အတွက် ဈေးကွက်မှာထရိတ်ဒင်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်.
19.05.2017 17:15 ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပြန်ကန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်ပုံစံတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ.
30.10.2018 05:32 AUD/JPY ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 30 October 2018
AUD/JPY ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 30 October 2018 AUD/JPY daily chart တွင် downtrend line violation တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည် … လက်ရှိ Indication များ အရ ဆိုလျှင် AUD/JPY သည် အပေါ်သို့ ဆက်လက်တက် နိုင်ချေရှိပါသည် …
usd forex ကုနျသှယျ သြစတြေးလျ7day forecast gold gbp ethereum eur ရေနံ ကုနျသှယျရေး bitcoin အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား forex signals nzd jpy cad chf အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း အပျော် သဘော aud bitcoin ပညာရေး အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း forex exchange လူသစ်များ ဖြစ်ထွန်းမှု litecoin dash စီးပွားရေး wti ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် လူတွေ့မေးမြန်း hardfork ဘလော့ချိန်း try ဂျာမနီ ထုတ်လုပ်သည် forex ပညာပေးသင်ကြားရေး forexfactory တောင် အာဖရိက စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ထိုင်ဝမ် dow jones လှုံ့ဆော်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် zar (တောင်အာဖရိက ရန်) metatrader စီးပွားရေး ဒေတာ သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ် gdp သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း mxn (မက္ကဆီကို ယွမ်) လူနေမှုဘဝ အာရှ thb (ထိုင်းဘတ်) ecb federal reserve us cnh အတိုးနှုန်း နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် လက်လီရောင်းချသူများ အင်္ဂလန်ဘဏ် နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက် အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် brl trump ရောင်းဝယ်သူ၏ ဝေါဟာရ ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး ဥရောပ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရွေးကောက်ပွဲများ ကနေဒါ ဘဏ် trend အရောင်းအဝယ် ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ တရုတ် အမြတ် လူသုံးကုန် အောင်မြင်မှု နယူးဇီလန် ဗဟိုဘဏ် ဈေးနှုန်းများ စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် ဂျပန်ဘဏ် စက်မှုလုပ်ငန်း ငွေကြေးများ ဘရာဇီး nfp အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ အခြေခံသုံးသပ်ချက်(fa) try (တူရကီ လိုင်ရာ) idr (အင်ဒိုနီးရှား ရူပီး) brent
19.05.2017 16:54 Screen သုံးခု အရောင်းအဝယ်စနစ်
လူသစ်များသည် မကြာခဏ မျက်လှည့်ကိရိယာ၊ ငွေအလုံးအရင်းရစေမည့် တစ်ခုတည်းသော အညွှန်းကိန်းကိုရှာဖွေတတ်ကြသည်။ ခဏတာ ကံကောင်းကြရင်
အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ trend အရောင်းအဝယ်
18.06.2018 10:36 Carry trade strategyCarry trade ဗျူဟာ
ကျွန်တော်တို့ သင့်အား နည်းပညာဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာများအကြောင်း အတော်များများ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ အတိုးနှုန်း
20.06.2017 10:47 MOMENTUM Forex နည်းဗျူဟာ